“Cristiano Ronaldo waa kan ugu fiican aduunka” – Simeone – Gool FM
“Cristiano Ronaldo waa kan ugu fiican aduunka” – Simeone
(Europe) 13 Maarso 2019.Tababaraha reer Argentina ee kooxda Atletico Madrid Diego Simeone ayaa qiray awooda Juventus, kadib soo laabashadii cajiib ahayd ay ku hor sameeyeen kooxdiisa Atletico.
Bianconeri ayaa guul kaga gaartay kooxda reer Spain ee Atletico Madrid 3 gool uu dhaliyay Cristiano Ronaldo taasoo u suuragalisay in Juventus ay u gudubto wareega siddeeda ee tartanka Champions League.
Hadaba Diego Simeone ayaa ciyaarta kadib sheegay:
“Waxay ahayd inaan si wanaagsan ugu difaacano aageena, sababtoo ah Juventus waxay sameeneysay hormar badan”.
“Waana inaan u hambalyeynaa sababtoo ah si wanaagsan ayay u weerar tameen, waxayna u ciyaareen si ka fiican sidii hore, waxaan sameenay qaladaad badan, weyna naga fiicnaayeen”.
“Uma maleenayo in kulankan uu ahaa keygii ugu xumaa aniga ahaan, sababtoo ah ma arko wax ka dhiman kooxdeyda, Juventus ayaa si sahal ah u ciyaartay, weyna naga fiicnaayeen laakiin ma aanan aheyn koox xun”.
Intaas kadib tababaraha reer Argentina ee kooxda Atletico Madrid Diego Simeone ayaa wuxuu hadalkiisa ku soo xiray amaanta Cristiano Ronaldo wuxuu yiri:
“Cristiano Ronaldo waa kan ugu fiican aduunka, wuxuuna sameyn karaa qaab ciyaareed sidan oo kale ah kulamada waa weyn”.
"Tani waa Sababta ay ii soo iibsatay Juventus.".-